केछ विद्रोही नेकपाको आगामी योजना ? विशेष अन्तर्वार्ता मार्फत विप्लवले गरे यस्तो खुलासा — Sanchar Kendra
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो पार्टीको छैटौं पुनर्गठन दिवस भव्य रुपमा देशैभरी मनाउदैछ । यहि पार्टी पुनर्गठन दिवसको अवसरमा नेकपा महासचिवको अन्तर्वार्ता पनि बाहिरिएको छ । केच छ त् नेकपाको आगामी योजना र कार्यदिशा ? हेर्नुहोस् यस्तो छ अन्तर्वार्ता..
१ – महासचिव कमरेड, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको छैटौँ पुनर्गठन दिवसको ऐतिहासिक अवसरमा छौँ, कस्तो महसुस गरिरहनुभएको छ ?
२- पार्टी पुनर्गठन दिवस मनाउँदै हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा यसको के महत्व छ ? प्रस्ट पारिदिनुहुन्छ कि ?
३ -केपी वली सरकारले ने.क.पा. माथि प्रतिबन्ध लगाएको वर्तमान अवस्थामा पार्टी पुनर्गठन दिवस कसरी मनाइरहनुभएको छ ?
४- हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले निकै महत्वपूर्ण निर्णय लिएको जानकारी प्रेसविज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभएको छ । वक्तव्यले तरङ्ग पनि ल्यायो । यहाँ पनि केपी सरकार र देशको अवस्थाबारे छोटोमा विश्लेषण राखिदिनुस् न ।
जस्तो कि राजनीतिक क्षेत्रमा केपी सरकार अकल्पनीय रूपले फासिस्ट, निरङ्कुश, दमनकारी, सर्वसत्तावादी, हत्यारो बन्दै गएको छ । जनता र देशको अधिकारका पक्षमा लड्ने राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई हरण गर्दै तस्कर, ठग, भ्रष्ट, दलाल, बलात्कारीहरूको रक्षाका लागि हाम्रो पार्टीमाथि प्रतिबन्ध थोपर्न पुगेको छ । जुलुससमेत गर्न नपाउने मूढी, मूर्ख निर्णय गरेको छ । आर्थिक क्षेत्रमा केपीकै मान्छेहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयको जग्गा बेचेर खानेमा पुगेका छन् । देशभरि उनका मान्छेहरूकोे लुट चलेको छ । सारा अराजकता, भ्रष्टाचारमा केपीकै मान्छेहरू डुबेका छन् । सांस्कृतिक क्षेत्र त अश्लीलता र छाडा क्रियाकलापले छोपिएको छ । केपीका मान्छे वेश्यालय खोलेर पैसा कमाउने प्रस्ताव गर्दै हिँडेका छन् । युवापिँढी लागूपदार्थको व्यापार र सेवनबाट ध्वस्त हुँदै गएको छ ।
देशको स्वाधीनतामाथि भारतीय साम्राज्यवादले खुलेआम अतिक्रमण गरेको छ । अमेरिकाले एकपछि अर्को हस्तक्षेप बढाउँदै लगेको छ । खुलेआम तिब्बतका पक्षमा बोलेर होस्, हिन्द–प्रशान्त रणनीति लादेर होस् वा भरखरै आतङ्कवादबारे देशहरूका रिपोर्टमा हाम्रो देश र पार्टीबारे पेस गरेको आपराधिक र झूटो विवरण होस्, अमेरिका नाङ्गो रूपले उत्रिएको छ । युरोपियन युनियनले पनि राजनीतिक, धार्मिक हस्तक्षेप बढाउँदै लगेको छ । तस्कर, ठगलाई कारबाही गर्दा नेपाली सेनालाई प्रयोग गर्न तयार हुने केपी सरकार सिमाना मिचिँदा लुगलुग काँपिरहेको छ । समग्रमा केपी सरकारले मुट्ठीभर दलाल पुँजीपति, भ्रष्ट, तस्करहरूको संरक्षण गरेर देशलाई सङ्कटमा हुल्नेबाहेक केही गरेको छैन ।
५- तपाईंहरूले देशको स्वाधीनतामाथि खतरा बढ्दै गएको विश्लेषण गरिरहेकै बेला भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई गाभेर नक्सा प्रकाशित ग¥यो । देश नै त्यसका विरुद्ध उत्रियो । केपी सरकारले पनि विरोध ग¥यो । केही सङ्घर्ष पनि गर्नुभयो । अब के होला ? के गर्नुपर्ला ? कसरी सोच्नुभएको छ ?
६- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि एक झमट सङ्घर्ष गर्यो तर निरन्तता भएन भन्ने गुनासो छ नि ?
७- भारतीय साम्राज्यवादी अतिक्रमणविरुद्ध संयुक्त कार्यक्रमको पहल कसरी गरिहनुभएको छ ?
८- संसद्वादी पार्टीहरूले त कूटनीतिक र राजनीतिक पहलबाट भारतसँगका सीमा समस्या हल गर्नुपर्छ भन्ने मत राखिरहेका छन् । के त्यसरी हल हुने देख्नुहुन्छ ? अथवा कसरी हल हुन्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
९- अमेरिकी रणनीतिमा पनि केपी सरकार जिम्मेवार छ भन्ने टिप्पणीप्रति यहाँको धारणा ?
१०- चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुभएको छ ?
११- के नेपाल विश्वशक्ति राष्ट्रहरूको खेलमैदान बन्न लागेको हो ?
१२- हालै ‘आतङ्कवादबारे देशहरूका रिपोर्टहरू २०१८’ मा अमेरिकी गुप्तचर ब्युरोले नेकपालाई आतङ्कवादी गतिविधि गरेको विवरण उल्लेख गरेको छ । यसबारे पार्टीको धारणा के छ ?
१३- विश्व भूमण्डलीकरण भैरहेको अवस्थामा तपाईंहरूले क्रान्तिको कुरा गरिरहनुभएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूसँग तपाईंको केकस्तो सम्बन्ध रहेको छ ? अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबिना नेपालमा क्रान्ति सम्भव छ त ?
१४ – अलिकति देशतिर फर्कौं, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्रतिबन्धपछि ठूला क्षतिहरू भोगेको भन्ने प्रचार छ । पछिल्लोपटक दाङबाट कमान्ड इन्चार्ज वीरजङ्ग, राप्ती ब्युरो इन्चार्ज सुवाससहित दुई दर्जन नेता–कार्यकर्ता साथै बाजुराबाट सीसीएम आदर्शसहित सोह्रजनाको गिरफ्तारीपछि यस्तो प्रचार छ । पार्टी जीवनमा वास्तविकता के हो ?
१५ -समग्रमा देशभरि पार्टीको अवस्था के छ ? जनता र मित्रहरूको बुझाइ कस्तो पाउनुभएको छ ?
१६ -केपी सरकारले निःशस्त्र नेता–कार्यकर्तालाई गोली हानेर हत्या गर्दासमेत पार्टीले ठूला कारबाही र प्रतिरोध गरेन । कतिले नसकेर हो भन्ने चर्चा गर्छन् भने कतिले पार्टीले बुद्धि पुर्याएर काम गर्दैछ भन्छन् । वास्तविकता के होला ?
१७ -सरकारले यही मङ्सिर १४ मा ५२ ठाउँका केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा उपनिर्वाचन गर्दैछ । पार्टीले सशक्त बहिष्कार गर्ने भनेको छ । सरकारी नेकपाका कार्यक्रमहरूलाई प्रतिबन्ध पनि भनेको छ । यो कस्तो बहिष्कार हो ?
१८- सरकारले त यहाँहरूको वार्तासम्बन्धी धारणालाई ठाडै अस्वीकार गर्यो नि ?
१९ -क्रान्तिकारी धु्रवीकरणको पाटोमा के भइरहेको छ नि ?
२०- दैनिक समस्याका विषयमा जनसङ्घर्ष पुगेन भन्ने पनि गुनासो सुनिन्छ । यसबारे कसरी सोचिरहनुभएको छ ?
२१- नयाँ प्रसङ्ग भनौँ, पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र सांसद मोहमद अफ्ताव आलमका विरुद्ध भएको कारबाहीलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो अलि फरक र संवेदनशील विषय छ । महराले निजी जीवनमा गरेका कमजोरी के हुन्, महिलाले नै भनेपछि अरूले धेरै बोल्ने कुरा भएन तर म ठोकेर भन्छु महरा मामिला केवल नैतिक र महिलाको मामिला मात्र भएन । सम्भोगलाई राजनीतिक मामिला बनाएको जस्तो लाग्छ । पुँजीवादी पार्टीहरूभित्र यस्ता सम्बन्ध नहुने कमै होलान् ! राष्ट्रपति सीको भ्रमणको बेलामा नै यसलाई उठाउनु, वलीले अमेरिकी कार्यक्रम एमसीसी रोक्ने महरा नै हो र गल्ती गरेका छन् भन्नु, प्रचण्डले अदालतमा रहेको मुद्दाबारे महराले नै गल्ती गरेका हुन् भनेर ठोकुवा गर्नु, यूएन, युरोपियन युनियनलगायतले वत्तःव्य दिएर कारबाहीको माग गर्नु यसका दृष्टान्त हुन् । आलमका विरुद्धको कारबाही एउटा क्रूर घटनामा प्रतिशोधी चाल मिसिएजस्तो लाग्छ । बाँकी त बुझ्दै जान सकिन्छ ।
२२- गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, जनताको सरकार सबै आए । कसका विरुद्ध लड्ने भन्ने प्रश्न पनि उठाइन्छ नि ?
२३ – पार्टी पुनर्गठन दिवसको सुखद अवसरमा थप केही भन्नुहुन्छ कि ?